मेरी आदी | मझेरी डट कम
ks — Mon, 04/08/2013 - 19:49
आँखाभरि आँशु टिलपिल टिलपिल गर्दैछन ! बोली मधुरो अस्पष्ट अनि अनुहार रातो देखिन्छ! आधा घण्टा जति भै सक्यो एकोहोरो बुथको फोन समातेर गन्गनाइरहेको! म यता उता गर्दै समय काटिरहेकी छु! आफ्नो पालो आउने बित्तिकै यहाँका बेलिबिस्तार पतिदेवलाई सुनाउना निक्कै आतुर छु!
नर्शले बोलाइन र रुममा जाने आदेश दिइन ! म रूममा पसेंर बजैलाई सोंधे, "भोक लाग्यो ?" टाउको हल्लाइन । मैले खानेकुरा ल्याएर दिएँ । उनी खाँदै भन्छिन, "नेपाल फोन गरिस त ?"
"बुथमा अघिदेखि एउटा मोटे बसेको छ उसका कुरा नै सकिएका छैनन् । म कसरी बोलौ ?" अलिअलि दुखी हुँदै र कठोर हुँदै म उनलाई उत्तर दिन्छु !
दिउसोको खाना पछि सबै बिरामीले बिश्राम गर्ने हुँदा म पनि बजुलाई बिस्तारामा पल्टाएर फेरि बाहिर निस्किएँ ! अनि उही अघिको बुथ (फोन गर्ने ठाउँ)तिर लम्किएँ ! त्यो मोटे अँझै बोलिरहेकै थियो । मलाई मनमनै रिस उठ्यो, "हैन यसले यो बुथ यसको ससुरालीबाट दाइजो ल्याको हो की के हो ? कति यही मात्र बोलिरहन्छ ?"
गएर झपारौ जस्तो पनि नलागेको कहाँ हो र ? तर पनि धर्यता गर्दै एउटा बेन्चमा गएर प्रतिक्षा गर्न थालें ! उता नेपालमा पाँच बजिसकेको थियो ! यही बेलामा बोल्न पाएदेखि बाबु छोरा सबैसँग बोल्न सकिन्थ्यो । नत्र एकछिनमा त सानो छोरो सुतिहाल्छ । मैले फेरि उसको बोली सुन्न भोलि पर्खनु पर्ने हुन्छ । नत्र...मन हतारिएर खप्नु भएको छैन उता मोटेले बुथ छाडेको छैन । यहाँ नया छु आजै बजुलाई लिएर हस्पिटल आएकी छु !
कुर्दाकुर्दै चार बजिसकेछ । अब त नेपालमा रातको आठ पनि बजिसक्यो । बाबुहरू पनि सुतिसके होला । मन त्यसै निरास र अमिलो भएको छ ! बेलाबेलामा बजुलाई पनि हेर्न जानु पर्ने हुँदा कोठाभित्र पसेर के निस्केकी थिएँ, फोन त फिलिपिनीको हातमा माछो नउम्कियोस भनेर समय झैँ दुई हात मजबुत छन् ! उफ्फ़ आज मेरो दिन बिग्रेकै हुनुपर्छ! सायद मेरो बोल्ने साइत जुरेकै छैन ऊ मस्त कुरा गरिरहेकी छ ! सायद ऊ पनि मेरा जस्तै साना साना बाबुनानीहरूसँग बोल्दै होली र त आफ्नै सुरतालमा पिंजडाबाट छुटेको चरी झैँ एकसुरमा दाँया बाँया नहेरी काखैमा नानी राखे झैं बेला बेला किस गर्दै बोलीको ब्रेक लगाउँदै छ ! अब भने मलाई बन्दै रिस उठेन भक्कानिएर रुन मन लाग्यो! मोबाइलबाट गर्नलाई ब्यालेन्स छैन! एउटा भएको बुथ प्याक छ! निरास भएर झोक्रिदै बेन्चमा बसे ! एकोहोरो नेपाल मात्रै सम्झना आयो । परिवारसँग रमाएर बसेका दिनदेखि बिदा भएर हिंडेका बेलासम्मलाई सम्झिन पुगिछु! बसेकै ठाउँमा घुक्क घुक्क गरेको आवाजले कसैले भन्यो, "किन रोएको के भयो ?"
कता कता लाज पनि लाग्यो र हतार हतार उठेर बाथरुममा पसें । अनि ऐना अगाडि आफ्नै अनुहार हेरेर बेसरी रोएँ !
भोलिपल्ट बिहानको नास्ता खाएपछि बजुलाई भनेर बुथमा आएँ । आश्चर्य के भने त्यहि हिजोको मोटे सुक्क सुक्क गर्दै फोन समातेर रुँदै रहेछ ! सोंचे, यो मभन्दा पनि निक्कै दुखेको छ यसलाई कसले घात गर्यो ? या यो किन सल्लो सुसाए झैँ सुस्ताउँदै खडेरीको मूल फुटे झैँ आँखाबाट मोतीको सागर बगाउँदैछ ? मेरो मनमा खुल्दुली मच्चियो जान्ने उत्सुकताले म उसको छेउसम्म तानिएँ !उसले पुलुक्क मलाई हेर्यो म खिस्स बनावटी हाँशो हाँसे !
उसले पनि नमस्ते फर्कायो!
मैले सोधें, "म तपाईंलाई हिजोबाट नियालिरहेकी छु! तपाई हिजो पनि यसरी नै रुनु हुँदै थियो र आज पनि रुँदै हुनुहुन्छ ! तपाई त छोरा मान्छे सार्वजनिक ठाउमा यसरी रुँनुको बजाय के होला जान्न सक्छु ?"
ऊ मौन बन्यो र बाइ पनि नभनी फोन बुथमा अड्काएर म भएतिर फर्कियो !
"तपाईं कहाँबाट आउनु भएको ?"
"यहाँ के काम गर्नु हुन्छ ?"
"कियरगिभर्को काम गर्छु!"
"आएको कति भयो ?"
"तीन बर्ष !"
"अँझै कति बस्नु हुन्छ ?"
श्"रीमान कहाँ हुनुहुन्छ ?"
"दुइटा छोरा !"
"कोसँग छन् ?"
"उहाले नै हेर्नु हुन्छ !"
"तपाईंलाई उनीहरूको याद आउँदैन ?"
मलाई झनक्क रिस पनि उठ्यो । २४ घण्टा उनीहरूकै यादमा डुबेको कसले देख्ने ? पल पल कोल्टे फेर्दा झरेका आँशुको कथा यही मनलाई मात्र थाहा छ । यो कस्तो जिन्दगी ! प्रश्न गर्नलाई पैसा पनि नचाहिने रहेछ । नत्र त्यसले यो मुटुमातिर लाग्ने गरी किन यो प्रश्न गर्थ्यो ?
मनमनै सोंचे अनि आफूलाई सम्हाल्दै मैले भनेँ, "त्यही याद आएर त हिजोबाट यो बुथमा आँखा तन्काइरहेकी छु । तपाईले बोल्न दिनु भएकै हैन !" म रुखो आवाजमा उत्तर दिन्छु !
ऊ फेरि कुरा अघि बढाउँछ र भन्छ, "कति बर्षकी हुनु भो ?"
"किन चाहियो ? तपाई मेरो इन्टरभिउ लिंदै हुनुहुन्छ हो ?"
"हैन किन रिसाको ? भन्न मिल्दैन भने नभन्नुस !"
म केही बेरको मौनता पछि उत्तर दिन्छु, "३४ बर्ष !"
"बाबुहरू नी कत्रा कत्रा छन् ?"
"एउटा १२ बर्षको र अर्को ६ बर्षको !"
"कति चाडै बिहे गर्नु भएछ है, कठैबरी सानै रहेछन आमाको कति याद आउँदो हो । साथीले आमा भनेर बोलाउँदा पनि सपना झैँ लाग्दो हो तिनीहरूलाई ती निर्दोष आँखाले आमाको ममता कति खोज्दाहुन् कति निस्ठुरी है तपाई ?"
उसको यो प्रश्नले म झस्किएँ मेरो मन बिथोलियो र आँखा रसाए! मैले कठोर हुँदै भने, "उनीहरूकै उज्वल भविष्यको खातिर म यहाँ संघर्ष गर्दैछु । यो मेरो रहर हैन मेरो बाध्यता हो बुझ्नु भो ?"
अनि दाया बाया नजर लगाएर यसो ऊ भएतिर हेरेको त ऊ त झन् बर्बरी आँशु झार्दै निगुर्मुन्टि न भएर बसेको रहेछ ! मैले सोधेँ, "किन रुनु भएको ? तपाईंभित्र कस्तो पीडा छ ? जो तपाईंले जति बेलै आँशु झारिरहनु पर्छ ?"
म अब ऊतिर फर्किएँ र सोध्न लागें ! ऊ उत्तर नदिकन बसिरहेको थियो । दुइटा प्रहरी आएर उसलाई लिएर रुम भित्र छिरे ।
"ए दाइ सुन्नुस न तपाईंको नाम.... ?" म उसलाई प्रश्न गर्दै थिएँ ।
नाम पनि जान्न पाइन त्यो मोटेको! साँझ परिसकेको थियो म पनि बजु भएतिर हानिएँ मनमा उत्सुकताले घच्घच्याइरह्यो ।
नौ बजेको छ बजुको सबै काम सकेर कफीको चुस्कीसँगै बुथ भएको बेन्चमा बसेर मोटे आउने प्रतिक्षामा नजर दौडाइरहेकी छु । नभन्दै ऊ ह्वीलचियरका पांग्रा दुवै हातले गुड्काउँदै बुथ भएतिर आयो साथमा दुई प्रहरी आएका छन! म बिस्तारै मोटे भएतिर लम्किन्छु
"नमस्ते ! सन्चै हुनुहुन्छ ?" म भेटघाटको औपचारिकता पुरा गर्छु । नमस्ते भन्दै ऊ मतिर फर्कियो । उसको चेहरा निक्कै उज्यालो छ । आँखा निलो गगन झैँ सफा र उत्सुक देखिन्छन ।
ओठमा मलिन मुस्कान सहित ऊ मलाई सोध्छ, "नास्ता भयो ?"
"हजुर भयो । तपाईंको नि ?"
"मेरो पनि भयो," ऊ बोल्छ ।
म फेरि प्रश्न गर्छु, "तपाईंको नाम ?"
मुसुक्क हाँसेर भन्यो, "यतिका चिनजान पछि ? एली !"
मलाई उसको आँशुको रहस्य जान्नु थियो । उसको जिन्दगी पढ्नु थियो । त्यसैले मैले कुरा कोट्याएँ, "तपाई आज निक्कै खुशी हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा भन्न ठिक हुन्छ् हुन्न मलाई थाहा भएन । तर तपाई कस्तो पीडा बोकेर बाच्नु भएको छ भन्न मिल्छ भने प्लिज...." मैले अनुरोध गरें !
ऊ बर्बराउन थाल्यो, "म १८ बर्ष पुरा भएपछि आर्मीमा भर्ति भएँ ! लेबनानको र इजरायलको बोडर्मा ट्रेनिंगको लागि लगियो ! तीन बर्ष सम्मको लामो बसाइमा मेरो मित्रता आदि नामकी एक युवतीसँग भयो ! उनी पनि ट्रेनिग मै भएकीले हाम्रो भेटघाटका दिनहरू रमाइला र मिठा हुन थाले! यसै क्रममा उनको र मेरो मन मिल्यो! अनि हामीले एकाअर्कासँग जिन्दगीसँगै जिउनेसँगै मर्ने बाचा गर्यौ ।"
"अनि त्यसपछि के भयो ?" म हतारिन्छु ।
"एकदिनको कुरा हो । उनको र मेरो प्रेमले लगभग छ महिना पार गरिसकेको थियो ! हाम्रो सम्बन्ध सागरभन्दा गहिरो आकासभन्दा फराकिलो भएर मुस्कुराइरहेको थियो ! हामी एकार्का प्रति धेरै विश्वास गर्थ्यौ! एक दिनको कुरा हो क्याममा उनी र म एक्लै भएको बेलामा हामीले मन मात्र नभएर तन पनि एकअर्कालाई सहज सुम्पिएका थियौ!"
उनी टक्क अडिन्छन।
"त्यसपछि ?" म फेरि उनलाई झक्झक्याउँछु ।
"उनी असाध्यै राम्री थिइन । सबैको आँखा उनीमाथि पर्थे! मेरो एउटा साथीले उनलाई मन परउदोरहेछ! एकदिन उसले आदिलाई मेरै छेउमा आएर प्रेम प्रस्ताब राख्यो ! आदिले अस्विकार गरिन् र मेरो र उनको सम्बन्धको बारेमा भनिन् । ऊ निरास भएर फर्कियो !"
"दिउसोको खान खाने बेला भएछ । तपाई पनि खानुस र म पनि बजुलाई खान दिन्छु । यो तपाईंको जीवनकहानी भरे पुरा गर्ने है मलाई बोलाइन्," भनेर म दौडिएँ । मन भने त्यही अल्झिरहेको थियो उनीसँगै ! दिउँसोको खानापछि उनी फोन गर्ने निहुँले बुथमा आए र म पनि बजु सुताएर उनको अगाडि आएर काँन ठाडा पार्दै बसे ! उनी अघिको कहानी पुरा गर्नतिर लाग्छन ।
"साँझाको बेला थियो उनी बेथ कफे (कफी पिउन) गएकी थिइन् । म उनको प्रतिक्षामा बरण्डाबाट क्षितिज नियाँलदै बसिरहेको थिएँ ! मेरो अगाडि उनलाई मन पराउने केटा देखा पर्यो र भन्यो - आदि मेरी हो म उसलाई तैलेभन्दा बढी माया गर्छु । त्यसैले आजैबाट उसलाई हेर्न छाडिदे भनेर धम्की दियो । मैले उसलाई सम्झाउने कोसिस गरें । ऊ मुर्ख झैँ उसैका कुरामा अडिक भएर ममाथि हातपात गर्न थाल्यो । उसको र मेरो झगडा निक्कै बेर चलिरहेको थियो । खै के के भयो थाहा छैन । मैले एक्कासि आफूलाई हस्पिटलको बेडमा पाएँ । मेरो एउटा खुट्टा काटिएको थियो ।"
यतिभन्दा उसका आँखा टिलपिल भएर भुइमा पोखिसकेका थिए । म बाँकी काहानी सुन्न हतारिदै थिएँ," प्लिज भन्नुस न!"
"म सानै हुँदा मेरी आमाको निधन भयो आमाको अनुहार धमिलो छाँया जस्तै अलिअलि याद छ! बाबाले अर्की आमा ल्याएर बस्नु भयो ! सौतेनी आमाले हेला गरेपछि म काकाको घरमा गएर बस्न पढ्न थालें ! मलाई पढ भन्ने कोही थिएन मेरो सुन्दर भविस्यको कल्पना गर्ने पनि कोही थिएन जसोतसो दससम्म पढेर आर्मीमा भर्ती भएँ त्यो पनि आज यो अवस्थामा आफूलाई भेटेको छु खै के भनौ ? सुख दुख बाँडे मन हल्का हुन्छ रे पीडा आँशुले बगाएर लैजान्छ रे त्यसैले नरोक्नुस अब पुरा भन्नुस यो अधुरो कहानिले म बिथोलिंछु एली !"
मैले भने ! ऊ बोल्न थाल्यो, "साथी र म बिचको झगडाले गोलीसम्म चलेको थियो । मैले हानेको गोलीले उसको छाति वारपार भएर उसले त्यही जिन्दगी बिसाएछ । म भाग्ने हुँदा माथिबाट बजारिएर दुवै गोडा काम नलाग्ने गरी यो अवस्थामा छु । मलाई ज्यान मारेको अभियोगमा जेल चलान गरियो । म यो ह्वीलचियरमा बसेको बाह्र बर्ष भयो ! पांच बर्षदेखि क्यान्सर रोगका कारण आधा मरिसकेको छु! डाक्टरले दिएको म्याद अब दुई हप्ता मात्र बाँकी छ ।"
यति भनिसक्दा मैले मेरा आँखामा फेवाताल भरिएको चालै पाइनछु । उसले नै "तिमी पहिले आँशु पुछ" भन्दा पो झसँग भएँ । उनी अघि बोल्दै गए, "मलाई भेट्न आदि आइरहन्छिन । म यो बुथबाट धित मरुन्जेल उनीसँग कुरा गर्दै रुने गर्छु । उनी जागिर खाने हुँदा सधैँ आउन पाउँदिनन । हाम्रो मायाँको चिनो छोरी छिन तर उनलाई म बाबु हुँ भनेर थाहा छैन ।"
"म क्यान्सरको रोगी छु भनेर छोरीलाई ढाटेका छौ । एक त जेलमा त्यसमाथि पनि म मर्दैछु भन्दा उसलाई कस्तो घात पर्ला ? उनी बिना बाबुकी छोरी भनेर भनेकी छिन उनकी आमाले ! आज आदि अफिस सकिएपछि छोरी लिएर मलाई भेट्न आउदै छिन । बिहान म खुशी हुनुको कारण त्यही हो । डाक्टरले भनेको मेरो स्वस्थस्थिति हिजोभन्दा आज निक्कै बिग्रिसकेको छ रे । भोलि यहाँबाट डिस्चार्ज हुँदैछु । जेलमा छोरी ल्याउदिनन । सायद मैले मेरी छोरीलाई देख्न पाउने आज अन्तिम दिन हो ।"
मैले एक शब्द पनि छोरी भनेर काखमा राख्न नपाई मर्ने भएँ । आदि रुएर कम्जोर भैसकेकी छन् मैले कत्तिभन्दा पनि उनले बिहे गर्न मानिनन मैले भनेको छु । मेरो निधनपछि तिमीले जसरी पनि बिहे गर्नु भनेर । तर उनी जवाफ दिन्नन । अब त्यो छोरीलाई कसरी र कस्तो जिन्दगी दिन्छिन थाहा छैन! सायद त्यसको जिन्दगी पनि कतै मेरै जस्तो ? उनीसँगसँगै म पनि निक्कै बेर आँशुमा डुबेर आफ्नो स्थान तर्फ लागेँ । भोलिपल्टदेखि त्यो बुथ जतिबेलै खालि हुन्थ्यो । तर म गोजीमा काड बोकेरै बसिरहें । त्यो दिनबाट हस्पिटल बसाइ दिक्क लाग्दो भयो ।